नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडनको आर्थिक योजना विश्वका लागि कति व्यवहारिक छ ? « Bizkhabar Online
नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडनको आर्थिक योजना विश्वका लागि कति व्यवहारिक छ ?
8 November, 2020 12:31 pm
काठमाडौं । प्रक्षेपणका अनुसार डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार जो बाइडन अमेरिकी राष्ट्रपति पद सुरक्षित गर्नका लागि पर्याप्त चुनावी भोट प्राप्त गरेका छन् । के उनको आर्थिक योजना महामारीको बीचमा काम गर्दछ र अमेरिकाको भाग्य बदल्छ ? चार वर्ष अगाडि डोनाल्ड ट्रम्पले श्रमजीवी अमेरिकीहरूलाई अकल्पनीय कुराको प्रतिज्ञा गरेका थिए । लगभग १०० बर्षदेखि अमेरिकाले विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रको रूपमा खडा गरेको निर्माण उत्पादनको फिर्ती, जुन विगत दुई दशकहरूमा चीन र मेक्सिकोको कब्जामा गइसकेको छ ।